Mutsvangwa pledges to ensure ZCC Mutendi gets broadcasting licence - HourlyHits
Zion Christian Church leader Bishop Nehemiah Mutendi 📷 ZCC Mbungo
by Tulip Charowa October 11, 2021, 7:09 AM 1.1k Views 702 Votes
INFORMATION, Publicity and Broadcasting Services Minister Monica Mutsvangwa has pledged to assist some schools under the Zion Christian Church (ZCC) led by Bishop Nehemiah Mutendi acquire a broadcasting licence.
Mutsvangwa also pleged Government assistance for schools run by the church with access to internet connectivity to enhance learning, the State-owned Herald newspaper reports.
She said she will engage the Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ) to look into ZCC Mutendi’s request.
Government last month issued six community radio licences across the country, a move which was highly commended.
Mutsvangwa added that internet connectivity remained a challenge in some parts of the country and promised to engage the relevant ministry to ensure some ZCC Mutendi-owned schools get connectivity.
Previous article RBZ resorts to spying citizens on social media for forex crimes
Next article 9-year-old model Tadisa Kaseke to represent Zimbabwe at Dubai show